एमाले दशौँ महाधिवेशन : संस्थापनभित्रै अघोषित दुई समूह सक्रिय, १० भाईलाई टिक्कनै मुस्किल , पूर्व माओवादीको अस्त्तिव गुम्ने खतरा - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com एमाले दशौँ महाधिवेशन : संस्थापनभित्रै अघोषित दुई समूह सक्रिय, १० भाईलाई टिक्कनै मुस्किल , पूर्व माओवादीको अस्त्तिव गुम्ने खतरा - खबर प्रवाह
चुनावी प्रतिस्पर्धा व्यक्तिगत रूपमै हुने निश्चित देखिए पनि संस्थापनभित्रै अघोषित रूपमा ईश्वर पोखरेल–शंकर पोखरेलको एउटा र सुवास नेम्वाङ–विष्णु पौडेलको अर्को समूहले आकार लिँदै
समूह १ : पोखरेलद्वयको नेतृत्व
संस्थापनभित्रको दुई समूहमध्ये एउटामा महासचिव ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा शंकर पोखरेल, विष्णु रिमाल, डा. राजन भट्टराईसहित केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारमा बसेर सघाउने सल्लाहकार समूहका नेताहरू छन् । यो समूहले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र महासचिव शंकर पोखरेललाई बनाउनुपर्ने लबिङ गरिरहेको छ । त्यस्तै, उपाध्यक्षमा बादललाई ल्याउनुपर्नेमा यो समूह नरम रहेको स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै, यही समूहले प्रदीप ज्ञवालीलाई उपाध्यक्ष या उपमहासचिव तथा रिमाललाई सचिव बनाउन चाहेको छ । त्यस्तै, यही समूहबाट पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सचिव पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् । यो समूहमा भानुभक्त ढकाल, खगराज अधिकारी, रघुवीर महासेठ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, आनन्दप्रसाद पोखरेल, कर्ण थापासहितका नेताहरू रहेका छन् । चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदा उनीहरू ‘टिम’सँग सल्लाह गरेर सचिव या केन्द्रीय सदस्यमै उम्मेदवारी दिने योजनामा छन् ।
समूह २ : नेम्वाङ र पौडेलको नेतृत्व
वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सुवास नेम्वाङ र महासचिवमा विष्णु पौडेललाई रुचाउने समूह तयार बन्दै गएको छ । नेता बादल तटस्थ रहे पनि पूर्वमाओवादी समूहका बाँकी नेताहरू भने नेम्वाङ र पौडेलसँग नजिकिएका छन् । त्यस्तै, दशबुँदे सहमति गरेर आएकामध्ये अधिकांश नेता पनि नेम्वाङ र पौडेलसँगै संवादमा छन् । नेम्वाङ–पौडेल रुचाउने यही समूहमा सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, स्थायी समिति सदस्य किरण गुरुङ, केन्द्रीय सदस्यहरू हिक्मत कार्की, वसन्त नेम्वाङ, पार्वत गुरुङ, रामेश्वर फुँयाल, कैलाश ढुंगेल, सुशीला नेपाल, सरेश नेपाललगायत नजिकिएका छन् । यो समूहले वरिष्ठ उपाध्यक्षका आकांक्षी ईश्वर पोखरेलले एक वर्षपछि ओली प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसपछि कार्यबाहक अध्यक्ष बनेर पार्टीको नेतृत्व गर्ने भ्रम फिँजाउँदै ‘लबिइङ’ गरिरहेको भन्दै प्रतिवाद गरेको छ । विधानमा पोखरेलकै लागि त्यो पदको व्यवस्था गरेको हल्ला फिँजाएको भन्दै ईश्वर–शंकरइतर समूह रुष्ट बनेको छ । युवा–विद्यार्थीको ठूलो समूह पनि नेम्वाङ र पौडेलको पक्षमा खुल्दै गएका छन् । युवा–विद्यार्थीका तर्फबाट महेश बस्नेतले यो समूहको नेतृत्व गरेका छन् ।
चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदा उपमहासचिव घनश्याम भुसाल पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष या उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने सोचमा छन् । उम्मेदवारी घोषणाअघि परामर्शमै रहेका भुसालले बुधबार साँझ महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अपिल गर्दै नेतृत्वका लागि अग्रसर भएको सन्देश दिएका छन् । उनीनिकट नेताहरूले भुसालले शुक्रबार आफ्नो दाबेदारी घोषणा गर्ने सम्भावना छ । चुनावी प्रतिस्पर्धा व्यक्तिगत रूपमै हुने निश्चित देखिए पनि संस्थापनभित्रै अघोषित रूपमा नेम्वाङ र पौडेलको एउटा तथा ईश्वर र शंकरको अर्को समूहले आकार लिँदै गएको छ । महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु हुँदासम्म समूहले आकार लिने सम्भावना रहे पनि एमालेको विधानले बन्देज गरेकाले ‘प्यानल प्रतिस्पर्धा’ भने हुनेछैन ।
सर्वसम्मत हुँदा आफैँ हुनुपर्ने संस्थापन समूहका आकांक्षी नेताहरूको अडानका कारण ओलीले मंगलबारको स्थायी समिति बैठकमा पनि प्रतिस्पर्धाकै संकेत गरेका थिए । त्यसअघि सम्पादकहरूसँगको अन्तत्र्रिmयामा पनि सहमति जटिल रहेको संकेत गर्दै आफू स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई स्वागत गर्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए । आफ्नै समूहभित्र बलिया प्रतिस्पर्धी रहेकाले छनोट गर्न ओलीलाई पनि सहज भएको छैन । त्यसैले उनले मंगलबार सम्पादकहरूसँगको अन्तत्र्रियामा विकल्प खुला राख्दै भनेका थिए, ‘यो मन पराएको, मेरो, यो अर्काको भन्ने छैन । पार्टीका सबै नेता–कार्यकर्ता मेरो नजरमा उस्तै हो । सबै निकट हुनुहुन्छ ।’
ओली आफैँले पनि मंगलबार आफू कतै नखुल्ने प्रस्ट्याएका थिए । ‘म कसैलाई नउठे हुन्थ्यो पनि भन्दिनँ किनभने आफैँ अध्यक्ष पदमा भएको मान्छेले तपाईं नउठ्दिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा सामान्य शब्दमा आग्रह गर्दा पनि दबाब पर्न सक्छ । दबाब दिने कुनै मनसाय छैन,’ ओलीले भनेका थिए, ‘त्यसैले कसैलाई अलिकति पनि दबाब महसुस हुने खालको कुनै व्यवहार वा अभिव्यक्ति गर्दिनँ । मैले उठ्ने, नउठ्ने अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन । उठ्ने भएँ भने अरूलाई नउठ्न पनि भन्दिनँ ।’
सचिवका आकांक्षी कर्ण थापाले पनि स्वस्थ व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्दै गएकाले सर्वसहमतिको सम्भावना कम रहेको बताए । ‘आकांक्षीहरूको अवस्था हेर्दा सहमतिको सम्भावना कम छ, प्रतिस्पर्धाकै सम्भावना बढेर गएको छ,’ थापाले भने । दुवै समूहले पूर्वमाओवादी र दशबुँदे सहमति गरेको समूहलाई समेटेर जाने कोसिस गरेका छन् । दुवै समूहले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई उपाध्यक्ष र सुरेन्द्र पाण्डेलाई उपाध्यक्ष या उपमहासचिवमा व्यवस्थापन गर्न चाहेको छ । त्यस्तै, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईलाई पनि सचिव या उपमहासचिवमा व्यवस्थापन गर्न खोजेको छ ।
पार्टीको निर्वाचन आयोगले १० मंसिरमा महाधिवेशन उद्घाटनपछि ११ गते बिहानैबाट निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेकाले पनि आकांक्षी सबैले उम्मेदवारी दर्ता गर्नेबित्तिकै सर्वसहमतिको प्रयास गर्ने समयसीमाको चाप नेतृत्वमाथि पर्नेछ । त्यसैले त्यस्तो भद्रगोल अभ्यासमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य दुवैतिर चुनावी प्रतिस्पर्धाको सम्भावना बढेको थुप्रै नेताहरूले नै खुलेआम बताउन थालेका छन् ।
स्थायी समिति बैठकमा रावलको फरक मत
दशौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका उपाध्यक्ष भीम रावलले स्थायी समिति बैठकमा फरक मत राखेका छन् । महाधिवेशनको सँघारमा उपाध्यक्ष रावलले प्रतिनिधि चयनको विषयलाई लिएर फरक मत राखेका हुन् ।
रावलले तीन दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए । अध्यक्ष ओलीले रावलले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रममा आफूलाई विश्राम लिनका लागि स्नेहभाव दर्शाएको भन्दै मंगलबार स्वागत गरेका थिए । तर, मंगलबारकै बैठकमा आफ्नो मतको कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै फरक मत राखेर रावलले उम्मेदवारी फिर्ता नलिने स्पष्ट संकेत गरेका छन् । रावलले कैलालीमा सहमति वा निर्वाचन नगरी स्वेच्छाचारी किसिमले प्रतिनिधिको नाम पठाइएकोप्रति फरक मत राखेका हुन् ।
दशबुँदेबाट एमालेमा रहेका कुन पदमा उठ्दै छन् ?
पार्टी विभाजनका वेला दशबुँदे सहमतिमार्फत एमालेमै रहेका नेताहरूले महाधिवेशनबाट आफूलाई सुरक्षित बनाउने विकल्पको खोजी थालेका छन् । माधव नेपालले पार्टी विभाजन गरेपछि दशबुँदेकै जगमा एमालेमा रहेका र माओवादी केन्द्रलगायत विभिन्न पार्टीबाट प्रवेश गरेका नेताहरूले सुरक्षित विकल्पमा छलफल थालेका हुन् । महाधिवेशन सर्वसम्मत हुने भन्दै तल्ला तहका कमिटीमा समेत सोहीअनुसार गर्न निर्देशन दिएका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले पछिल्लो समय ‘कसैले प्रतिस्पर्धा गर्न चाहे त्यसलाई स्वीकार गर्ने’ बताइसकेका छन् । उनले प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्ने भने पनि व्यक्तिगत रूपमा धेरैले उनको चाहनाविपरीत आफ्ना आकांक्षा व्यक्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।
ओलीलाई चिढ्याएरभन्दा फकाएर आफूलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने मनस्थितिमा पुगेका प्रभावशाली नेताहरूसमेत महाधिवेशनको अघिल्लो दिनसम्म ओलीको ‘ग्रिन सिग्नल’ पर्खिरहेका छन् । केही नेता भने आफूलाई ओलीले यसै पनि पार्टीभित्र सुरक्षित राख्दैनन् भन्ने लागेपछि उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन् । जसका कारण ओलीले चाहेजस्तो सर्वसम्मत अध्यक्षमा दोहोरिने वा आफूले चाहेकालाई सुरक्षित गर्ने परिस्थितिको अन्त्य हुँदै गएको छ ।
उपाध्यक्ष भीम रावलले यसअघि नै अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् । त्यसबाहेक दशबुँदेबाट पार्टीमा रहेका अन्य नेताले अहिलेसम्म औपचारिक उम्मेदवारीको घोषणा गरेका छैनन् । त्यस्तै, उपमहासचिव घनश्याम भुसालले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठ्ने मनस्थिति बनाएका छन् । भुसालले सम्भवतः बिहीबारसम्म आफ्नो उम्मेदवारी सार्वजनिक गर्नेछन् । तर, त्यसबाहेक अन्य नेताले के गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेका छैनन् ।
औपचारिक घोषणा नगरे पनि अधिकांश नेता पुरानै पदमा भए पनि आफूलाई सुरक्षित गर्ने तयारीमा छन् । यसअघि नै पदाधिकारीमा रहेका कम्तीमा पनि सोही पदमा रहन चाहेको आपसी छलफलमा प्रकट गर्दै आएका छन् । कतिपयले त सार्वजनिक रूपमा समेत अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यले अहिलेसम्म कुनै पदमा दाबी सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर, संवादमा रहेका नेताहरूका अनुसार दुवैजना उपाध्यक्षमा दोहोरिन चाहिरहेका छन् ।
दुवैले भने आफूहरू छलफलमा नै रहेको र कुनै निष्कर्षमा पुगिनसकेको बताए । यस्तै, नवौँ महाधिवेशनमा महासचिव पदमा पराजित भएका सुरेन्द्र पाण्डेले पुनः महासचिव पदमा दाबी गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् । तर, ओलीले अरू नै नेताहरूलाई उक्त पदमा राख्ने सम्भावनाका कारण महासचिवमा दाबी गरे पनि उपाध्यक्ष पाए चित्त बुझाउन सक्नेछन् । पाण्डेले भने महाधिवेशन सुरु भएपछि मात्रै आफ्नो दाबी सार्वजनिक गर्ने बताए ।
यस्तै, सचिव योगेश भट्टराईले आफू सचिव पदमा दोहोरिन चाहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । दशबुँदेमार्फत एमालेमा रहे पनि सत्ता बहिर्गमनका समयमा मौन रहेका कारण ओलीको सदाशयता पाएका भट्टराई सचिवमा दोहोरिने सम्भावना छ । अर्का सचिव गोकर्ण विष्टले भने उपमहासचिव पदमा उम्मेदवारी दिने विषयमा आफूनिकटसँग छलफल चलाएका छन् । यद्यपि, उनी पनि उपमहासचिव नमिलेको खण्डमा सचिव पदमै दोहोरिन तयार हुन सक्ने देखिएको छ । त्यस्तै, स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले आफू उपाध्यक्षमा उठ्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । तर, औपचारिक घोषणा भने उनले पनि गरेका छैनन् ।